YEYINTNGE(CANADA): Saturday, May 12
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/12/20120အကြံပြုခြင်း
INTERVIEW BY NAY ZAW(TH-Z)
ရှေ့တန်းတပ်ရင်းမှာ တပ်တွင်း ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးမှုရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ တမူးမြို့နယ်၊ တွီဗန်ကျေးရွာ အခြေစိုက် ရှေ့တန်းတပ်ရင်း ခလရ (၂၆၆) မှာ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီခွဲလောက်က တပ်တွင်း ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ရဲဘော်(၂) ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် အရာရှိတဦး၊ ဒုတပ်ကြပ်တဦးနဲ့ ရဲဘော် (၂) ဦး စုစုပေါင်း (၄) ဦး သေဆုံးခဲ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေသခံတဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ တွီဗန်ရွာမှာရှိတဲ့ တပ်ရင်းပေါ့နော်။ ညမှာ ဒုတပ်ကြပ်နဲ့ စစ်သားတွေက ရန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ခင်ဗျ၊ ဒုတပ်ကြပ်က ရဲဘော်တစ်ယောက်ကို ပါးရိုက်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီမကျေနပ်တော့ ဒီရဲဘော်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း နောက်ရဲဘော်တစ်ယောက်တို့က ရဲဘော်၂ ယောက်ရယ်၊ ဒုတပ်ကြပ်ရယ်၊ ၂ ပွင့် ဗိုလ်တယောက်ရယ်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ M16 ပေါ့နော်။ သေနတ်ရှည် ၄လက်ရယ်၊ ၂ ပွင့်ဗိုလ်ကိုင်ထားတဲ့ ပစ္စတို တလက်ရယ်၊ ကျဉ်ကပ်၊ ကျဉ်တောင့် (၅၀၀) ကျော်ယူပြီးတော့ ဆိုင်ကယ် ၂ စီးနဲ့ ထွက်သွားတယ်။”
ဒီလိုဖြစ်ပွားတာ ဟုတ်မှတ်ကြောင်း အဆိုပါ ရှေ့တန်းတပ်ရင်း ရုံးမှ အရာရှိတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပြီး သေဆုံးသူ တွေကတော့ ဗိုလ်ရာဇာထွေး၊ ဒုတပ်ကြပ် ထွန်းထွန်း၊ တပ်သား ဇော်ဇော်လွင်နဲ့ ဝင်းကျော်တို့ ဖြစ်ကြပြီး၊ ပစ်ခတ်ခဲ့သူတွေ ကတော့ တပ်သား အောင်ဇော်ဌေးနဲ့ လှိုင်ဝင်းကျော်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပစ်ခတ်သူတွေကို ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုမိုလျှော့ပေါ့ရေး အမေရိကန် စောင့်ကြည့်နေ
အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုမိုလျှော့ပေါ့ပေးဖို့နဲ့ မကြာခင်မှာ သံအမတ်အကြီး
အဆင့် ပြန်ခန့်အပ်ဖို့ စောင့်ကြည့်နေသလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လက်ထောက် အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပက်ထရစ် မာဖေး (Patrick Murphy) က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့ ပြုပြင်
ပြောင်းလဲမှုတွေ ထဲမှာ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေ ကျန်နေသေးတယ်လို့ မစ္စတာ မာဖေးက ပြောပါတယ်။
အရေးယူပိတ်ဆို့မှု Sanction ပိုပြီး လျှော့ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနဟာ အမေရိကန် လွှတ်တော် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိမိတို့ ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု အားလုံးဖေါ်ပြပြီး၊ ဒီဟာတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ လေ့လာဆောင်ရွက်ဖို့ ရှေ့နေ အယောက် ၂၀ ပါတဲ့အဖွဲ့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ ပက်ထရစ် မာဖေး - က
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူး ပြည်သူ အခက်အခဲ သွားရောက်လေ့လာ
2012-05-12 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အဖြစ် သူတာဝန်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ်က ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ဒီကနေ့ လက်တွေ့ ကွင်းဆင်း လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိတဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးခွန်သာမြင့်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ "ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို သွားရောက် ကန်တော့အပြီး ကော့မှူး ကျေးရွာပေါင်းစုံမှာ ရှိတဲ့ ဘွဲ့ရ အလုပ်လက်မဲ့ လူငယ် ၁၅၀ ခန့်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတိုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ သူတို့ ဖြစ်စေချင်တာတွေကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်၊ မူဆလင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကော့မှူးမြို့နယ်ထဲမှာ ရေရှားပါးလို့ ရေရရှိရေး ပြုလုပ်ပေးနေကြသော ပညာရှင်များ၊ အလှူရှင်များနဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြို့နယ် ဆေးရုံက မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုသလဲလို့ မေးပါတယ်။ အခု လောလောဆယ်မှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ စကားပြောနေပါတယ်။" အခုလို ကော့မှူးဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့ရာမှာ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ အခက်အခဲ (၂) မျိုး တွေ့ရတယ်လို့ ဦးခွန်သာမြင့် က ပြောပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာနဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲဖြစ်ပြီး ကျန်အခက်အခဲတွေကတော့ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီနေ့ ခရီးစဉ်မှာ မိဘမဲ့ ကျောင်းတကျောင်းနဲ့ မူကြိုကျောင်း တကျောင်းကိုလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး နှုတ်ဆက်စကား ပြောခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ၏ လမ်းညွှန် မိန့်ကြားချက် (၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၁ ရက်)
by Yangon Media Group on Saturday, May 12, 2012 at 8:59am ·
အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ဒုတိယ သမ္မတနှင့်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနှင့် ဒေသ ဥက္ကဌ များခင်ဗျား
ဒီနေရာမှာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အသီးသီး အနေနဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝင်ရောက် ဆက်သွယ်လာလျင် အစိုးရနဲ့ရော နိုင်ငံရေး ပါတီများ ၊ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပါ ပတ်သက်ခြင်း မရှိဘဲ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး အမြင် သက်သက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အောက်ပါ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းသွားရန် ဖြစ်ပါတယ် -
- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အလိုက်
အစီအမံများကို အောက်ပါ ရည်မှန်းချက်များနဲ့ အသေးစိတ် လေ့လာ ကြံဆ စီမံ သွားကြဖို့ မှာကြားလိုပါတယ် -
တရုပ်ကင်းလွတ်ဇုံဆိုလို့ နန်းမြို့ရိုးကြီးအတွင်းသာ ယဲ့ယဲ့ရှိ
Khant Nyi Pe
မန္တလေးနယ်တ၀ိုက်မှာ တရုပ်ကင်းလွတ်ဇုံဆိုလို့ နန်းမြို့ရိုးကြီးအတွင်းသာ ယဲ့ယဲ့ရှိပါတော့တယ်..။
တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ မှော်ဘီ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှ လယ်ဧကသုံးသိန်း ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ကမ်းလှမ်း
[ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ် ]
တရုတ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင်များက မှော်ဘီနှင့် တိုက်ကြီးမြို့နယ်များ အတွင်းရှိ လယ်မြေဧက သုံးသိန်းတွင် ""တစ်ဧကလျှင် စပါးတင်း ၂၀၀ ကျော်ထွက်အောင်"" အာမခံစိုက်ပျိုးရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်သန်းက ပြောသည်။
“သူတို့က တရုတ်ပြည်မှာ တစ်ဧက တင်း ၂၅၀ ထွက်အောင် စိုက်ထားတာ ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်ပြတယ်။ အဲဒီ့လယ်တွေကို နှစ် ၃၀ ပေးပါလို့ တောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အခုတောင်းတာက လယ်ကောင်းတွေမို့ သူတို့က ခူးပြီးခပ်ပြီးသား အဆင်သင့် စိုက်ချင်ကြတာ” ဟု ၄င်းက မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မူဝါဒအရ မြန်မာပြည်သူများ နှစ် ၅၀ အတွင်း စပါးစိုက်ပျိုး၍ မရသေးသော ချင်းတောင်၊ ပူတာအိုနှင့် အခြားမဖွံ့ဖြိုးသေးသော ဒေသများတွင်သာ လာရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ ထို့အပြင် စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာ၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ရုံနှင့် အရင်းအနှီးများ စိုက်ထုတ်ပေးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည့်သူများကိုသာ လိုလားကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အကျိုးရှိမယ့် ကိစ္စကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘာမှမထိမ်ချန်ဘူး၊ သို့သော် ပြည်သူတွေ လုပ်စားရမယ့် စားကျက်ကို လုတာတော့ မပေးနိုင်ဘူး” ဟု ဒေါက်တာမြင့်သန်းက ပြောသည်။ ဝန်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ တိုးတက်ရန်အတွက် ကူညီဖို့ရန် အသင့်ဖြစ်နေသောကြောင့် ပြည်သူများ အကျိုးရှိစေမည့် ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအား ဌာနနှင့် ပုဂ္ဂလိကများက ခေါ်လာစေလိုသည်၊ သို့ရာတွင် ပြည်သူများ နစ်နာမှု မဖြစ်စေလိုကြောင်း ၄င်းက ပြောပြခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ်7Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအား နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက် အမိနိုင်ငံသို့ ပြန်လာကြရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။
ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးတွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထိုသို့ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကြီးသား မပီသပေမယ့်စာသားလေးကိုတော့ သဘောကျတယ်
ဒီနေ့ မနက် မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်နားမှာ သင်တန်းသွားတက်ရင်း KMD နဲ့ မဟာမြိုင်မှတ်တိုင်ကြား လမ်းလယ်ခေါင် အုတ်ခုံမှာရေးထားတဲ့ စာတန်းလေးကိုတွေ့လို့ဓါတ်ပုံ ရိုက်လာတာပါ........ ဒီလုပ်ရပ်က နိုင်ငံကြီးသား မပီသပေမယ့် ရေးရဲတဲ့သတ္တိရယ် စာသားလေးကိုတော့ သဘောကျတယ်....... လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး ပြသနာကို ပြည်သူတွေ ကိုယ်စား ရပ်တန့်ခိုင်းလိုက်တာပါ...... အမြန်ဆုံး ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေပြင်မှ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေမလုပ်တော့မှာပါ....... ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးပါ...........
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/12/20122အကြံပြုခြင်း
ဒီလို ကြော်ငြာလို့ ရသားပဲ။ ကံစမ်းမဲတောင် ပေးမှာဆိုပဲ။ ဂျာနယ်ကြီးတစ်ခုမှာ ပါလာတဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုကို တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
via Hein Htike Zan
Caverta® is Ranbaxy's brand of the most effective treatment for impotence or Erectile Dysfunction (ED) in men.
အမှန်တကယ် ဆိုရင် Prescription ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှ သောက်ရတဲ့ ကာမ
ပြည့်ဝဆေးကို လုံးဝ ကြေငှာခွင့် (ဂျာနယ် ၊ ဘီဘုတ် ၊ တီဗီ ၊ ဗီစီဒီ) မပေးထား
ပါဘူး။ ဥပဒေ အတိအကျရှိပါတယ် ..... ဥပဒေ စိုးမိုးမှုသာ မရှိတာပါ .....း))
ဒီလိုဆေးမျိုးကို လူငယ်တွေ အသုံးပြုမယ်ဆို အခန့်မသင့်ရင် သေနိုင်ပါတယ်။
Responsible and Law-abiding Media ??? မပြောတော့ပါဘူး ..... ဟဲ ဟဲ